UPraia de Jericoacoara, eBrazil | Izindaba Zokuhamba
IJericoacoara, phakathi kwamabhishi amahle kakhulu eBrazil
Amabhishi nezindawo zokungcebeleka | | Brasil, Amabhishi
Enye yezindawo ezinhle zelanga nolwandle eNingizimu Melika yiBrazil. Ngalowo moya wephathi kanye nehlobo laphakade eliveza leli zwe elikhulu, abantu abaningi baseNingizimu Melika bakhetha ukuchitha amaholide abo ehlobo lapha. Futhi ngokuya enyakatho ohamba kuyo, kuba ngcono ukubukeka komhlaba, amabhishi kanye nezinga lokushisa.
Enye yezingcono kakhulu amabhishi aseBrazil yiyona Ibhishi iJericoacoara, esifundazweni saseCeará. Iyingxenye yepaki kazwelonke enegama elifanayo futhi ingamakhilomitha angama-300 ukusuka enhlokodolobha yombuso, idolobha lase Fortaleza. Ngomlando walo omningi, nangekhulu lama-XNUMX futhi, lolu lwandle olubabazekayo lwaseBrazil lwalungaziwa kakhulu futhi abadobi kuphela ababeluthola.
Kepha ngolunye usuku kwafika ezokuvakasha kwathi maphakathi neminyaka yama-90s kwakungekho ukushoda kwemithombo yamazwe omhlaba eyaqopha ibhishi laseJericoacoara njengaphakathi kwabayishumi amabhishi amahle kakhulu emhlabeni. Indlela engcono yokufika lapho usuka eFortaleza ngeveni elingu-4 × 4 ngoba ngale ndlela umgwaqo uba yinto engokwemvelo ngoba ngalezi zimoto ungangena ezindunduma noma uye ngqo ngasogwini.
Kulokhu lolwandle lwaseBrazil Isimo sezulu somile kanti izinga lokushisa livamise ukuba phakathi kuka-25 no-30ºC unyaka wonke. Amanzi olwandle acwebezelayo futhi afudumele futhi ungawabona aluhlaza okwesibhakabhaka noluhlaza okwesibhakabhaka. Phakathi kukaJulayi noDisemba umoya uheha labo abenza i-surfing, i-windsurfing ne-kitesurfing. Ngaphezu kwalokho, ukuba sepaki likazwelonke elizungezile kunamathafa ayizinkulungwane amahle okumelwe azi futhi anikeza ithuba lokwenza izivakashi eziningi.
Kusukela esigodini esidobayo kuya esigodini sabavakashi, namuhla sinengqalasizinda elungiselelwe izivakashi ezinamahhotela kanye namahhotela, izindawo zokudlela kanye nohambo. Ungakhohlwa ukuvakashela, kulokhu, odumile UPedra furada, idwala eliyinqaba elineminyaka eyizinkulungwane ubudala, noma izigidi. Bathi yindawo eyindida ngakho-ke kufanele uyohlola ... yize ngicabanga ukuthi kuzoba nzima kimi ukuphuma kulezi "zindunduma zaseParaguay" engizibona esithombeni ...
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » travel » Amabhishi » IJericoacoara, phakathi kwamabhishi amahle kakhulu eBrazil
Amabhishi amahle kakhulu eHong Kong
ISitatimende Sokukhululeka, Indawo Yamagugu Omhlaba